साढे ६ खर्बको आयात हुँदा ८२ अर्बको निर्यात, व्यापार घाटा ५ खर्ब ६८ अर्ब
मंसिर ८, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा आयातसँगै निर्यातमा वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (२०७८/ ०७९ को कात्तिक मसान्तसम्म) को तथ्यांकअनुसार आयातमा ६१ दशमलव ५७ र निर्यातमा १०४ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
बितेका चार महीनामा रू. ८२ अर्ब १२ करोड १२ लाख बढीको स्वदेशी वस्तुको निर्यात हुँदा ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड ४३ लाख बढीको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चार महीनामा रू. ४० अर्ब २० करोड बराबरको निर्यात भएको थियो भने सोही अवधिमा रू. चार खर्ब दुई अर्ब ४९ करोड बराबरको आयात भएको थियो ।
चालू आवको चार महीनामा रू. पाँच खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा रू. तीन खर्ब ६२ अर्ब २९ करोड बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा नेपालले ५६ दशमलव ८३ प्रतिशतले व्यापार घाटा बेहोरेको हो ।
यस्तै, चार महीनाले नेपालले रू. सात खर्ब ३२ अर्ब ४१ करोड बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा नेपालले रू. चार खर्ब ४२ अर्ब ६९ करोड बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवको चार महीनामा ६५ दशमलव ४५ प्रतिशतले वैदेशिक व्यापार बढेको छ ।
चार महिनाको अवधिमा १३८ देशबाट रू. ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड ४३ लाख बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट भएको छ ।
भारतबाट रू. तीन खर्ब ८५ अर्ब ९५ करोड ७० लाख बढीको आयात भएको छ । भारतपछि ठूलो मात्रामा आयात चीनबाट भएको छ । चीनबाट एक महीनामा रू. ९४ अर्ब ३० करोड १४ लाख बराबरको आयात भएको छ ।
यस्तै, एक महीनाको अवधिमा भारतमा रू. ६६ अर्ब ९४ करोड ३९ लाख र चीनमा रू. ३१ करोड १२ लाख बराबरको निर्यात भएको छ ।
चालू आवको चार महीनामा सबैभन्दा धेरै डिजेल आयात भएकोे छ । चार महिनामा रू. ३४ अर्ब ३३ करोड २१ लाख बराबरको डिजेल आयात भएको हो ।
यस्तै, भटमासको कच्चा तेल रू. २७ अर्ब २२ करोड ७१ लाख, २० अर्ब ३५ करोड ८६ लाख बराबरको मोबाइल, रू. १९ अर्ब १७ करोड ५७ लाख बराबरको कच्चा पाम आयल, रू. १८ अर्ब ६६ करोड ६५ लाख बराबरको पेट्रोल र रू. १७ अर्ब ६६ करोड ४० लाख बराबरको आइरन, स्टिल आयात भएको छ । रासस